उपहारमा बहुपयोगी ‘मोरिङ्गा’ – Merokhushi
उपहारमा बहुपयोगी ‘मोरिङ्गा’
औषधिका लागि सितलचिनीको जरो, बोक्रा, फूल, बीउ र फल बहुउपयोग गरिन्छ
मेरो खुसी । ७ चैत्र, २०७६ शुक्रबार १९:५० मा प्रकाशित
लेखक : हेमन्तराज काफ्ले
मानिस सामाजिक प्राणी हो । समाजमै जन्मन्छ । समाजमै हुर्कन्छ । समाजमै मर्छ भने समाजको लागि किन केही राम्रो काम नगर्ने भन्ने कुरा मैले आमाबाट प्रेरणा पाएको हुँ । कैलालीको टीकापुरस्थित हाम्रो घरमा सयौं प्रजातिका रुख थिए । म रुखकै छहारीमा हुर्के बढें । हाम्रो दिनचर्या प्रायः रुखसँगै बित्थ्यो । जानेर वा नजानेर बाल्यकालदेखि नै रुखप्रति मायामोह हुनु स्वभाविक थियो । म जब ११ वर्षको थिए । मेरी बहिनीलाई पहिलो पटक निमको विरुवा उपहार दिएको सम्झना ताजै छ । त्यसपछि कसैको जन्मदिन वा कुनै पर्व र उत्सवमा विरुवा उपहार दिने बानी नै बस्यो । मैले उपहारमा विरुवा दिने चलन सुरु गरें । मैले बाँड्ने बिरुवाहरुमा निम, जामुन, बेल, अमला, हर्रो, बर्रो, सितलचिनी थिए । अहिले त सितलचिनीको विरुवा मात्र उपहार दिन्छु ।प्राचीनकालमा ऋषिमुनिहरुले सितलचिनीलाई जीवनबुटिको रुपमा लिने गरेको धार्मिक ग्रन्थहरुमा पनि उल्लेख छ । यो वृक्ष चमत्कारी वनस्पति हो । सबै प्राणीका लागि निकै उपयोगी हुन्छ । यसका फूल, पात, फललगायत सबैथोक जीवनोपयोगी हुन्छन् । यसको अंग्रेजी नाम मोरिङ्गा ओलिफेरा हो । अमेरिका, फ्रान्स, क्यानडाजस्ता देशमा मोरिङ्गा क्याप्सुल निकै महँगोमा बिक्री हुन्छ । फलबाट तेल उत्पादन गरी कपाललाई फुट्न नदिने र सिल्की बनाउन प्रयोग
लेखक काफ्ले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सितलचिनीको विरुवा दिँदै
गरिन्छ । फल पानी शुद्ध गराउन पनि प्रयोग हुन्छ । बोक्राले शरीरका एलेर्जीहरु जस्तैः दाद, लुतो आदिमा पिसेर लगाउदा फाइदा गर्छ । पात नियमित खाली पेट्मा सेवन गर्ने गर्नाले पेट सम्बन्धी दीर्घरोगहरु सन्चो हुन्छ । यसको सेवनबाट अनुहारमा चमक ल्याउनुका साथै कालोपोतो र डन्डीफोरलाई निकै उपयोगी मानिएको छ । अनुसन्धानकर्ता डा. स्टोनका अनुसार यसले ३०० भन्दा बढी रोग निर्मुल गर्छ । सितलचिनीमा दूध, अन्डा गाँजरहरुभन्दा पनि धेरै गुणा बढी भिटामिन हुन्छ । यसको प्रयोगबाट शरीरलाई निकै फुर्तिलो बनाउँछ । सितलचिनीको छिप्पेको फललाई उमालेर साँझ सुत्ने बेला निरन्तर प्रयोग गर्दा सेक्स पावरको रुपमा पनि उपयुक्त मानिएको छ । मोटोपन र पेट घटाउनलाई सितलचिनी उपयोगी छ ।
सितलचिनीमा भिटामिन ए र बी बढी मात्रामा पाइन्छ । भिटामिन सीसमेत पाइन्छ । यी तीनै भिटामिन उच्च मात्रामा हुने कमै प्राकृतिक खाद्य पदार्थ छन् । यसमा फलाम, प्रोटिन, फाइबर, क्याल्सियम, फास्फोरस एवं खनिज तत्व प्रचूर मात्रामा हुन्छ । भारतको राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषदका अनुसार, सितलचिनी हेमाग्लोबिन बढाउनमा सहायक हुने जनाएको छ । यसको नियमित सेवन गरे रक्तअल्पता र आँखाको रोगबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । एन्टिबायोटिकको गुणले भरिपूर्ण हुन्छ । यसको फूलले दाल झानेर खाँदा शरीरमा आइरनको मात्रा दिन्छ ।
मुख्यतः पेटसम्बन्धी सबै प्रकारका विकारबाट छुटकारा पाउन सितलचिनीको सेवन निकै उपयुक्त मानिन्छ । यसले पाचनक्रियालाई बलियो बनाउँछ । कपाल झर्ने समस्याबाट मुक्ति पाइन्छ । आँखाको ज्योति बढाउँछ । यसमा भिटामिन ए पर्याप्त हुने भएकोले रतन्धो रोग लाग्दैन । गठिया र मोटोपनाले पीडितहरूको लागि पनि यो उपयोगी छ । यो वायुनाशक हुन्छ । सितलचिनी खानाले बोसो कम हुन्छ । बोसो कम हुँदा मोटोपना कम हुन्छ । यो पीडानाशक प्राकृतिक औषधि पनि हो । यसले सुन्निएको पनि कम गर्छ ।
लेखक काफ्ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सितलचिनीको विरुवा दिँदै
सितलचिनी वीर्यवर्धकसमेत मानिन्छ । आयुर्वेदले यसलाई नपुंसकताको उपचारमा प्रभावकारी मानेको छ । आयुर्वेदका थुप्रै औषधि तयार पार्न सितलचिनीको जरो, बोक्रा, फूल, बीउ र फल नै उपयोग गर्न सकिने बहुउपयोगी विरुवा हो ।डा.आर्युेवेदाचार्य श्रीधर सुवेदीका अनुसार सितलचिनीमा मानव शरीरलाई आवश्यक पर्ने ९० भन्दा बढी पोषकतत्व, ४६ किसिमका एन्टिअक्सिडेन्ट, ३६ प्रकारका एन्टिफालामेन्टरी र ८ प्रकारका अत्यावश्यक एमिनो एसिड जस्ता पौष्टिक तत्वहरु पाइन्छ ।
सुरु–सुरुमा मैले विरुवा बाँड्दा थुप्रैले पागल पनि भनें । विरुवा बाँडेर के हुने हो र ? भनेर गिज्जाए पनि । तर मैले हार मानेन । काम गरिरहेँ । मेरो लागि विरुवा नै जीवन हो । विरुवा छ त हामी बाँचेका छौं । स्वच्छ अक्सिजन पाएका छौं । त्यसैले जन्मदिने आमा, पत्नी र सन्तानभन्दा पनि मलाई बढी माया विरुवाको लाग्छ । विरुवा बाँड्दा म खुसी पनि हुन्छु । मैले रास्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, संघ र प्रदेशका मन्त्री, जनप्रतिनिधि जस्ता राज्यका तीनै तहका उच्च ओहोदाका व्यक्तिलाई सितलचिनीको विरुवा उपहार दिएको छु । विरुवा बाँड्ने अभियानकै कारण उच्च ओहोदाका ब्यक्तिसँगको भलाकुसारीको अवसर पाउने गरेको छु । मैले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई उपहार दिँदा तीन मिनेट सितलचिनीको फाइदाबारे जानकारी गराउन पाएको थिए । मैले चिनेका समाजका लब्ध प्रतिष्ठित धेरै ब्यक्तिको जन्मदिनमा सितलचिनीको विरुवा दिने गरेको छु । विरुवा दिन पाउँदा म रमाउँछु । म चाहन्छु, बहुपयोगी सितलचिनीबाट सबैले लाभ पाउनुपर्छ । यही अभियानले मैले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सितलचिनीका बारेमा प्रस्तुति दिन पाएको छु । पुरस्कार र सम्मान दिलाएको छ । सामान्य रुपमा हेर्दा एउटा विरुवा बाँडेको मात्र देखिन्छ । विरुवा अभियानले प्रकृतिलाई निकै ठूलो योगदान गरेकोमा म आफैसँग निकै सन्तुष्ट र खुसी छु ।
लेखक काफ्ले प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई सितलचिनीको विरुवा दिँदै
म सात महिनामै जन्मेको थिए । तौल पनि ८ सय ग्राम मात्र थियो । उमेर नपुग्दै जन्मेकाले कतिले मरेको बच्चा जन्मेछ पनि भनेछन् । कति सानो बच्चा भनेर गाउँका मानिस हाम्रो घरमा रमिता हेर्न आउँथे । यही मोरिङ्गाले अहिले मेरो अभियान हेर्न देश विदेशबाट मानिस आउँछन् । मलाई नजिकबाट चिन्नेहरुले मोरिङ्गा बाबाको उपनाम दिएका छन् । म जलवायु संरक्षण अभियान नामक संस्थाको अध्यक्ष पनि हुँ । भविष्यमा आफ्नै जग्गा किनेर मोरिङ्गाकोे निजी वन बनाउने लक्ष्य छ ।
डुडुवामा झन्डा फरियो, बोर्ड र वडापत्र राख्न बेवास्ता
आत्मसन्तोषका लागि सेवा गरौं